Kitaabni Hiikaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin qophaa’e Eebbifame. - NuuralHudaa
Kitaabni Hiikaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin qophaa’e Eebbifame.
Kitaabni hiikan Qur’aana Kabajamaa Afaan Oromootiin qophaa’e guyyaa kaleessaa biyya Sa’udii magaalaa Riyaaditti kan Eebbifame tahuu beekame. Sagantaa Eebbaa kana irratti biyya keenya dabalatee Ulama’oonni biyyoota adda addaa argamuun qooda fudhatanii jiru.
Kitaabni Hiikaa Qur’aanaa kun afaan biyyoota addunyaa adda addaatiin akka qophaa’u karoorfame gara hojiitti kan seename yoo tahu, kan afaan Oromoo dursee xumurramuun kan eebbifame tahuu odeeyfannoon arganne ni mul’isa.
Sagantaa Eebbaa Kanarratti kitaabni hiikaa Qur’aana kun Calbaasiif kan dhiyaate yoo tahu, kitaabni tokkichi Riyaal Sa’udii 5212 kan bitame tahuus gabaafameera.
Mamega Beker says:
Kitaabni khun essati akka gurguramu yo beytan koment barreysaa.
Ya oromo beysisa godhuu malee akka itti gurguramu online gubbatti mala godhuu dadhabdanii bara 2 guutuu? Kha afaan Amaariffaa laafumatti arkama. Maali teenya tana tanallee mijjeysuun qeyra itti taate sa?